फेवाताल सीमांकनका कमान्डर पुण्यप्रसाद पौडेलको टोली फेवा किनारतिर बरालीदै । – POKHARA TOURISM NEWS
HomeNewsफेवाताल सीमांकनका कमान्डर पुण्यप्रसाद पौडेलको टोली फेवा किनारतिर बरालीदै ।
फेवाताल सीमांकनका कमान्डर पुण्यप्रसाद पौडेलको टोली फेवा किनारतिर बरालीदै ।
बषौं देखि अतिक्रमण, प्लटिङ भएको फेवाताल पुरानै अवस्थामा फर्किएला त ?
पौष १ पोखरा : पोखरामा रहेको फेवा तालको पुनस् सिमाङ्कन हुन लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संघीय सरकारको निर्देशनमा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा फेवातालको पुनः सिमाङकन गरीन लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा ६ महिनाभित्र सबै टुंगो लगाउन ३ वटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयमा सिन्को नभाँचिएपछि सरकारले तत्कालिन जिविस कास्कीका सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा हालै १९ कात्तिकमा चार किल्ला निर्धारण सिमाङकन तथा नक्साङ्कन समिति गठन गरेको छ ।
आज सोही फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययन थालेको छ । समितिलाई २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर फेवातालको सीमांकन तथा नक्सांकन गर्न भनिएको छ ।
समितिमा मालपोत विभागका महानिर्देशक भरत गौतम, नापी विभागका उपसचिव (प्राविधिक) निर्मलकुमार आचार्य, मालपोत कार्यालय कास्कीका निमित्त प्रमुख केशव सुवेदी, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण कार्यक्रम अधिकृत प्रभा पाण्डे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण पौडेल लगायत छन्
फेवाताल नेपालकै उत्कृष्ठ पर्यटकीय गन्तब्य भित्र परेपनि अतिक्रमण, प्लटिङ तथा खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रान लगायतका कारणले फेवातालको क्षेत्रफल बर्सेनि पुरिँदै गएको छ।
तालको सिमाङकन सम्बन्धमा यस अघि वि.स. २०१०, २०१८, २०३३, २०३८, २०५२, २०५८ र पछिल्लो पटक २०६६ मा अध्ययन भएपनि ठोस कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।